agriculture development bank(agriculture development bank) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
बेलहिया नाकामा कृषि विकास बैंकद्वारा साबुनपानीले हात धुने व्यवस्था
काठमाण्डौ । कृषि बिकास बैंक लिमीटेडको ५ नम्बर प्रदेश कार्यालय भैरहवाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रुपन्देही जिल्ला, भैरहवा स्थित नेपाल भारतसिमा नाका बेलहियामा भारत तथा अन्य मुलुकबाट नेपाल प्रबेश गर्ने यात्रीहरुलाई साबुनपानी र हेण्डवासले हात सफा गर्ने व्यवस्था मिलाउन १००० लिटरको पानी ट्यांकी, दुईवटा धारा सहितको...
कृषि विकास बैंकलाई ‘माइतीघर मण्डला’ संरक्षणको जिम्मा
काठमाण्डौ । कृषि विकास बैंक लिमिटेड र काठमाण्डौ महानगरपालिकाबीच माइतीघर मण्डला सुधारका लागि सम्झौता भएको छ। बैंकका बैंकका कामु उपमहाप्रबन्धक धु्रवचन्द्र गौतम र काठमाण्डौ महानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। सम्झौताअनुसार मण्डलामा बगैचा निर्माण गर्ने, वृक्षारोपण...
कृषि बैंकको नाफामा २२.०८% को बढोत्तरी, अन्य सूचकमा पनि बढोत्तरी
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा कृषि विकास बैंकले १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको छ । यो अवधिमा बैंकको खूद नाफा १ अर्ब ५८ करोड आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा नाफा २२.०८ प्रतिशतले बढेको हो । यस्तै, संचालन मुनाफामा १६.०८ प्रतिशतको बढोत्तरी भई १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको उचाईमा पुगेको हो...
कृषि विकास बैंकको साढे २ अर्बको ऋणपत्र माघ १४ गतेदेखि बिक्री खुला गरिने
काठमाण्डौ । कृषि विकास बैंक लिमिटेडले साढे २ अर्बको ऋणपत्र माघ १४ गतेदेखि बिक्री खुला गर्ने भएको छ । चार दिनअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट निष्कासन अनुमति पाएसँगै बैंकले रु. १ हजार दरका कुल २५ लाख युनिट रहेको ‘१०.३५% एडीबीएल कृषि बैंक ऋणपत्र, २०८३’ बिक्री खुलाउने भएको हो । यो बैंकले जारी गर्न लागेको ऋणपत्रमा लगानी गर्नेहरुका लागि हाल...
अहिलेको लाभांश दर नघट्ने कृषि बैंकका सीइओको सार्वजनिक प्रतिबद्धता
काठमाण्डौ । पछिल्लो दुई वर्षदेखि सेयरधनीलाई दिने लाभांशमा बढोत्तरी गर्ने सफलता पाउँदै आएको कृषि विकास बैंक लिमीटेडले आगामी वर्ष समेत सो स्तरको लाभांश नघट्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । बैंकको ५३ औं वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार काठमाण्डौ एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत...
वाणिज्य बैंकमध्येमै आकर्षक ब्याज पाइने कृषि बैंकको ऋणपत्र स्वीकृत
काठमाण्डौ । सरकारको समेत स्वामित्व रहेको कृषि विकास बैंकलाई धितोपत्र बोर्डले ऋणपत्र निश्कासनको स्वीकृति दिएको छ । यो बैंकले जारी गर्न लागेको ऋणपत्रमा लगानी गर्नेहरुका लागि हाल वाणिज्य बैंकहरुले अफर गरेको भन्दा केही बढी ब्याजदर अफर गरिएको छ । हाल बजारमा आइरहेका वाणिज्य बैंकका ऋणपत्रमा लगानी गर्नेले वार्षिक १०.२५ प्रतिशतसम्म...
कृषि विकास बैंक घोटाला प्रकरण : आठजनाविरुद्ध सरकारी रकम दुरुपयोगमा मुद्दा दायर
काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाण्डौको न्यूरोडस्थित कृषि विकास बैंकको कर्मचारी दीपिका रेग्मीसहित आठजनाविरुद्ध सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगमा मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सो बैंकको नयाँ सडक शाखाकी ट्रेलर सहायक रेग्मीविरुद्ध रु चार करोड २४ लाख १३ हजार ६११ बराबरको हानि–नोक्सानी...
कृषि विकास बैंक सिस्टम ह्याक प्रकरण, रु. ४.७६ करोड लुटमा थप एक पक्राउ
काठमाण्डौ । कृषि विकास बैंकको सिस्टम ह्याक गरेर रु.४ करोड ७६ लाख लुट्ने गिरोहका एक सदस्य काठमाण्डौबाट पक्राउ परेका छन् । मोरङ रंगेली नगरपालिकाका ४३ वर्षीय दीपक नेपाललाई नेपाल प्रहरकिो महानगरीय अपराध महाशाखाले शुक्रबार काठमाण्डौको गोल्फुटारबाट पक्राउ गरेको हो । कृषि विकास बैंकको गोल्फुटार शाखामा ९ लाख रुपैयाँको चेक साट्न गएका बेला...
कृषि विकास बैंकद्वारा लाभांश प्रस्ताव, नगद र बोनस सेयर कति ?
काठमाण्डौ । कृषि विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको आज (मंगलबार) बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले चुक्तापुँजीको कुल ३० प्रतिशतले हुन आउने लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । बैठकले गत वर्षको वितरणयोग्य सञ्चित मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ६ प्रतिशत बोनस सेयर र २४ प्रतिशत नगद लाभांश (लाभांश करसहित)...
कृषि विकास बैंकको रु. २.५ अर्बको ऋणपत्रले पायो सुरक्षित रेटिङ
काठमाण्डौ । कृषि विकास बैंक लिमिटेले निकाल्न लागेको रु. २.५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्रले सुरक्षित रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको रेटिङ प्रतिवेदनअनुसार बैंकले न्यून जोखिम रहेको रेटिङ ‘इक्रा एनपी एलए’ प्राप्त गरेको छ । यो रेटिङले बैंकको ऋणपत्रमा लगानी गर्दा एकदमै कम जोखिम रहने संकेत गर्दछ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक...
फर्जी नामबाट अधिकृतबाटै कृषि विकास बैंकको रु. ३४ करोड झ्वाम, उच्च अधिकारीहरु बेखबर
काठमाण्डौ । सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकका एक शाखा अधिकृतले नक्कली नामबाट एक वर्षको अवधिमा बैंकबाट झन्डै ३४ करोड रुपैयाँ झ्वाम परेको घटना सार्वजनिक भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा यो मुद्दा दायर गरेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो । बैंकका स्वयम्भूका शाखा अधिकृत केदारप्रसाद गौतमले २०७१ असोजदेखि २०७२...
कृषि विकास बैंकले रु.२.५ अर्बको ऋणपत्र ल्याउने, ब्याज १०.३५%
काठमाण्डौ । सरकारको समेत स्वामित्व रहेको कृषि विकास बैंकले समेत ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । यो बैंकले जारी गर्न लागेको ऋणपत्रमा लगानी गर्नेहरुका लागि हाल वाणिज्य बंैकहरुले अफर गरेको भन्दा केही बढी ब्याजदर दिइनेछ । हाल बजारमा आइरहेका वाणिज्य बैंकका ऋणपत्रमा लगानी गर्नेले वार्षिक १०.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउँछन् । तर, कृषि विकास...
यस्तो आयो कृषि विकास बैंकको प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरण, खुद नाफा रु. ६०.७३ करोड
काठमाण्डौ । कृषि विकास बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा खुद नाफा १०.१३ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा बैंकले ६० करोड ७३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत वर्ष यही अवधिमा ५५ करोड १४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । बैंकले समीक्षा अवधिमा वितरणयोग्य मुनाफा...
कृषि विकास, नवील लगायतका बैंकको सिस्टम ह्याक गरी रु. ५ अर्ब भारत लग्ने यस्तो योजना
काठमाण्डौ । कर्मचारीसहितको गिरोहले कृषि विकास बैंक, नवील बैंक लगायतका वाणिज्य बैंकको सिस्टम ह्याक गरी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम चोरी गर्ने योजना बनाएको खुलेको छ । प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम कृषि विकास, नवील लगायतका बैंकबाट मात्रै चोरी गर्ने गिरोहको योजना रहेको दाबी...